Voadona mafin’ny haintany sy ny ranomasina voaloto ny tapany Atsimon’i Madagasikara · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Novambra 2009 17:17 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 繁體中文, 简体中文, bahasa Indonesia, English
[*Fanamarihan'ny mpandikateny: ny lahatsoratra dia nosoratana talohan'ny fanaovan-tsonia fifanarahana tany Addis-Abeba ny alin'ny Zoma 6 mifoha Asabotsy 7 Novambra 2009]
Raha ny hoavy ara-pôlitikan'i Madagasikara, izay tena tsy azo vinavinaina mihintsy izay alehany hatramin'ilay fanonganam-panjakana nitranga tamin'ny volana Martsa lasa teo iny, dia tapahina amin'izao fotoana izao any Addis-Abeba amin'ny alalan'ny fanelanelanana ataon'ny vondrona iraisam-pirenena mpampifandray, iaraha mahalala amin'ny anarana hoe GIC [Groupe International de Contact], izay manandrana indray manelanelana mba ahitana marimaritra iraisana avy amin'ireo ankolafy efatra tonta. Ny filohan'ny Vondrom-pirenena Afrikana sady isan'ireo mpanelanela izay manatrika any Addis-Abeba rahateo, ingahy Jean Ping dia nanokatra ny fivoriana tamin'ny teny manao hoe:
“Araky ny iarahanareo mahalala, ny toe-javatra misy izay iainana any Madagasikara ankehitriny dia leo ny vahoaka Malagasy, miandrandra izay fotoana hiafaran'ity krizy ity ny olona. Krizy izay, izy vahoaka rahateo no mitondra faisana indrindra. Tsy mitsahatry ny miharatsy isan'andro isan'andro ny toe-draharaha ara-piaraha-monina sy ara-ekonomika any amin'ny tanindrazanareo. Mendrika hiaina tsaratsara kokoa noho izao ny vahoaka Malagasy ary miankina aminareo tanteraka ny fahefana hanova izany”
Izany teny izany dia toa azo ambara koa fa fihevitry ny ankamaroan'ny blaogasyfera [Malagasy mpivoy Aterineto] izay manompana ny herim-pony amin'ireo olana hafa koa izay tsy maintsy atrehin'i Madagasikara. Satria Faritra maro ankehitriny no indray voadonan'ireo loza samihafa toy ny haintany tsy manam-paharoa, ny ranomasina voaloton'ny faharendrehan'ny sambo izay niteraka fanapoizinana ny fiveloman'ireo mpanjono aman'aliny, ary ny loza hoan'ny tontolo iainanana vokatry ny fanapahana tsy ara-dalàna ireo hazo sarobidin'ny reniala.
(Fanampim-baovao : vita sonia tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo ary ny fifanarahan'ireo ankolafy ara-politika efatra (BBC) : Madagasikara dia hiarahan'ny “vondrom-piloham-pirenena” 3 mirahalahy miara mitondra. Azonao arahanina amin'ireto rohy ireto izay fanadihadiana mikasika izao vaovao farany sady goavana izao: Reuters sy Madagascar Tribune (fr))
Ny tsirariny ara-tontolo iainana vokatry ny fandotoan'ny sambo Gulser Ana ny ranomasina
Ny Gulser Ana dia sambo avy any Torkià nitatitra fôsfata izay rendrika tany amin'ny morontsiraky Madagasikara ka nanapariaka loto simika tamin'izany firendrehana izany ka fototry ny fahafatesan'ireo trozona sady niteraka aretina tamin'ireo fianakavian'ireto mpanjono monina any an-toerana. Na dia notaterin'ireo fantsona fampitam-baovao vitsivitsy azy ny vaovao tato ho ato, dia efa roa volana lasa izay no naharendrika ity sambo ity araky ny notaterin'ny mpiblaogy Malagasy tamin'ireo lahatsorany tsirairay avy tamin'ny voalohandohan'ny volana Septambra.
Toy izao no nosoratan'i Tomavana amin'ny blaoginy (fr):
Ankoatry ny aloka izay ataony amin’ ity vaovao ratsy hoan'ny tontolo iainana ity, ny adilahy politika manodidina ireo fanendrena izay ho ministra dia mampanontany tena ny amin'izay mba fanaraha-maso ity raharaha saro-pady ity.
Tsotra ny fanontanian'i Joan : “Mba renareo ve izay vaovao momba ny Gulser Ana ?”. Anisan'ireo namela hafatra i Capt Collin Smith izay mamoaboafy izay mety ho fototr'izao faharendehan'ny sambo izao:
Ny fanazavana izay hany mety hanala tsiny ny kapitenin'ity sambo ity dia raha sendra izay fahasimban'ny milina. Fa izay rehetra fototra ankoatr'izay dia fahadisoan'olombelona avokoa, izany hoe tsy fahaizana, raha tsi-fivakiana loha tsotra izao aza. Amin'ny fomba ahoana koa no irendrehan'ny sambo amin'ny alina mazava tsara raha toa ka samy zatra ady sy mitandrina tsara avokoa ny manam-boninahitra teo am-pamiliana sy ny kapiteny ? [..] Fomba hafa fitsitsiana (koa anie izany fanaovana hitsin-dàlana izany e!)Raha ny izy dia tokony ho voatana dieny mikasi-tany ny kapiteny sy ny manam-bonihaitra izay teo am-paniliana tamin'io fotoana io.
I Mialisoa kosa mitatitra ao amin'ny blaoginy (fr):
voan'ny aretina manembatsembana azy ireo hiaina (sempotsempotra) ny mponina any sady miofakofaka ny hodiny no mivalana. Satria tsy vitan'ny hoe voan'ny fandotoana ireto olona ireto fa nampiasaina tamin'ny fandiovana ireo morontsiraka koa anefa tsy nisy fitaovam-piarovana na fiasana tandrify hanaovana izany akory.
Ny tsy fisian'ny tatitra hatrany am-piandohana mikasika ity raharaha ity dia nahatonga an'i Tomavana hanoratra amin'ny Twitter hoe:
“@fanjakely Toa ohatry ny Malagasy latsaka fahefany ireo mponina any Atsimon'i Madagasikara. Mandre kabary tsara lahatra ombieny ombieny aho anefa tsy mahita izay mba firaisan-kina akory”
Sambo rendrika nampitain'i Mialisoa
Indrisy anefa fa tsy izany ihany no loza mianjady any amin'iny faritra iny.
Haintany tsy manam-paharoa
Tena vitsy ny orana tany amin'ny faritra Atsimo tato ho ato. Araky ny nambaran'ny gazety “the Guardian” [ny Mpiambina], izao haintany tsy ara-potoana izao dia vokatry ny fiovan'ny toetr'andro (nisondrotra 10% mantsy ny mari-pàna) ka niteraka haintany tsy manam-paharoa sy marika fambara izay tsikaritra efa hatramin'ny enim-bolana lasa izao, fa ho henjana ny kere. Tovoheryzo Raobi Jaona no manazava izay fomba iantefan'ny fiovan'ny toetr'andro ny faritra Atsimo (fr):
“Fahiny, isaky ny folo taona tany ho any no ahitana haintany. Fa nanomboka tamin'ny taona 2000 kosa dia efa in-4 sahady izao”
Féroce Remanongona, olomboafidy any an-toerana, aza dia miteny mihitsy hoe (fr):
Mivavaka izahay mba handalovan'ny Rivomahery aty aminay. Na dia mandrava ireo tranonay aza ireny, dia aleonay misedra azy ireny toy izay kere
Teny henjana izany indrindra raha tsaroana izay fomba namiraviran'ireo rivomahery vao tsy ela akory iny faritra Atsimon'ny nosy iny.
Ny toeram-pandinihana “Panos Insitute” dia namoaka vao tsy ela andian-dahatsoratra nampitondraina ny lohateny hoe “Pushed to the Edge” [atao ankila-bao] mikasika izay fianjadian'ny fiovan'ny tontolo iainana amin'ny vahoaka Malagasy monina any amin'ny faritra Atsimon'ny nosy. Toy izao ny fijoroana vavolombelona nataon'i Bruno:
Tsikaritro fa tsy manaraka ny fihevitray toy ny mahazatra ny toetr'andro tato ho ato, fa tara be ohatra vao manomboka ny fahavaratra… Ka tsy ny fambolem-bary ihany no simba fa na ireo Bélé [voamanga] sy Balahazo [mangahazo] koa aza. Mihamafana hatrany hatrany ny andro, ka tena hasakasaka be ny fambolena Balahazo… Rehefa fotoana filana indray, dia tsikaritro fa madinidinika ireo voany raha oharina amin'ireo vokatra taloha. Resaka vary indray, taloha dia kitapo telo no jinjainay fa ankehitriny kosa dia zara raha misy vody harona. Tena misy fiovana mihitsy ka mampanontany tena hoe “fa dia inona loatra no mahazo ny toetr'andro e?»
Misy tatitra vokatry ny fanadihadiana izay vao navoaky Richard Marcus amin'ny alalan'ny “American Political Science Association” [Fikambanana Amerikana hoan'ireo Mpandinika ny Pôlitika] izay mampiseho ireo olana tsikaritra manodidina ny fitantanana ny rano any amin'ny faritra Ambovombe-Androy. Toy izay no voasoratra:
“Ireo fokonolona any ambanivohitra dia voetry nandoa saran-drano midangana dia midangana. Tsy nivonona ny hiandraikitra ny fitantanan-draharaha amin'ny maha olom-boafidy azy ireo mpitondra no sady tsy nahavita nanangona hetra mba ho takalon'ny fampiasana ny rano na koa fikambanana mba hiantoka ny fanamboarana ny famatsian-drano hoan'ny tanana rahateo”
Stephane, mpiblaogy anivon'ny fikambanana Foko Madagascar dia vao avy nanatrika ny Vòvònàna izay nokarakarain'ny Firenena Mikambana handinihina izay mikasika ny Fiovan'ny Toetr'Andro tamin'ny volana Septambra lasa teo [New-York] sady miblaogy mikasika izay olana tsy maintsy hovahana amin'ny fampivoarana ny firenena andalam-pandrosoana toa an'i Madagasikara.
Farany, nisy volavolan-dalàna izay manameloka ny fanapahana ireo hazo sarobidy any amin'ny reniala any Madagasikara izay napetraky ny Solombavambahoaka Earl Blumenauer (Demokraty avy any Oregon) amin'ny Antenimieram-Pirenena Amerikana. Nirongatra mafy mantsy ny fanapahana ireo hazo sarobidy avy amin'ny reniala, hatramin'izay nanombohan'ny fifanolanana ara-politika izay.
Ireo gazety “Courier International” sy “l'Express de Madagascar” moa dia mitatitra koa fa hay ny fitondrana mihitsy no nanome alàlana ny fanondranana ireo hazo mavokely sarobidy, izay efa tra-tehaka, tamin'ny faramparan'ny volana Septambra (fr).